Margarekha » क्वारेन्टाइन सोल्टी होटल जस्तो हुने कुरा भएन तर राम्रो व्यवस्थापन गरेका छौँ । वडा अध्यक्ष थारु
बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. १५ का वडा अध्यक्ष पतिराम थारु संग कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि प्रयासरत रहेको बताएका छन् । क्वारेन्टाइनको अवस्थाबारे कोहलपुर नगरपालिकाकै सबैभन्दा राम्रो व्यवस्था भएको दाबी गरेको छन् । अध्यक्ष थारुसंग मार्गरेखा सम्वादाता आंकाक्षाले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :
तपाईको वडाको अवस्था के छ ?
कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. १५ मा अहिले हामी कोरोना भाइरसको महायुद्धमा लडिरहेका छौँ । रात दिन नभनी जनताको सेवामा लागी रहेका छौँ । हामीले घाम भनेका छैनौ भोक भनेका छैनौँ । क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा हामी रात दिन लागीपरेका छौँ ।
त्यहाँको क्वारेन्टाइनको अवस्था कस्तो छ ? कति मान्छे राख्नुभएको छ ?
अहिले कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. १५ मा ३४ जना रहेका छन् । जसमा महिलाको संख्या ६ जना बालबालिका २ र २६ पुरुषहरुको संख्या रहेको छ र उहाँहरु नेपाल राष्ट्रिय आधारभुत विद्यालय चौधरीयामा बसेको १५ दिन भइसक्यो । यसभन्दा पहिलेपनी भारतबाट आउने मानिसहरु क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएको थियो उहाँहरुको स्वास्थ्य जाँच भएर घर फर्किसक्नुभएको छ । क्वारेन्टाइनको अवस्थाको बारेमा हामीले यहाँ बसेका मानिसहरुलाई खानाको राम्रो व्यवस्थापन गरेका छौँ । बिहान र दिनको समयमा खाजाको लागी चना अन्डा, चिया, बिस्कुट दिन फेरी फेरी दिने गरेका छौँ । अहिले सम्म हामीले राम्रो व्यवस्थापन गरेका छौँ भन्ने लागिरहेको छ ।
कतिपय मानिसहरुले क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन र सोचेअनुरुप गर्नुभएन भन्ने टिप्पणी गरिरहेका छन् नी ?
हामी निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरु आफ्नो वडाको विकास निर्माण र जनताको समस्यालाई समधान गर्दै अगाडी बढिरहेको अवस्थामा एक्कासी आएको कोरोना भाइरसका कारण त्यही युद्धमा लड्नु पर्ने देखियो । व्यवस्थापन पक्षमा जहाँसम्म कुरा गर्नुभयो तपाई अनुगमन पनी गर्न सक्नुहुन्छ र क्वारेन्टाइनमा बसेका मानिसहरुलाई सिधै सम्पर्क पनी गर्न सक्नुहुन्छ क्वारेन्टाइन काठमाण्डौको सोल्टी होटल जस्तो हुने कुरा भएन तर सकेसम्म राम्रो व्यवस्थापन गरेका छौँ ।
क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा नगरपालिका र अन्य संघसस्थाको सहयोग कतिको पाउनुभएको छ ?
क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा नगरपालिकाले सहयोग गरेकै छ । समय समयमा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख स्वास्थ्यकर्मीहरुको आगमन भइरहेको छ । उहाँहरुको सहयोगले नै हामी अगाडी बढिरहेका छौँ । त्यसैमा पनी स्थानियबासीहरुको र कोहलपुर १५ मा रहेका आम समाजसेवी , बुद्धिजिवी,युवा,महिलाहरुको सहयोग उल्लेखनीय रहेको छ ।
थप मानिसहरु भारतबाट आउदै छन् भन्ने सुनिएको छ कति मानिसहरु आउदैछन् ?
प्रश्नका लागि धन्यवाद । कामको शिलसिलामा कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. १५ बाट भारतमा गएका केही मानिसहरु आइसकेका छन् भन् कतिपय सम्पर्कमा छन् । उनीहरु केही दिनमै आइपुग्लान अहिले मेरो सम्पर्कमा १३ जना हुनुहन्छ उहाँहरु भोली सम्म आइपुगेपछी हामी क्वारेन्टाइनमा राख्छौँ ।
कोरोनाको महामारीका कारण धेरै जनाले रोजगार गुमाएका छन् । उनीहरूलाई रोजगार दिने वडाको तयारी के छ ?
कोरोना भाइसका कारण थुप्रै मानिसहरुले रोजगारी गुमाएका छन् । त्यसैमा पनी कामको शिलसिलामा भारत गएका मानिसहरु पनी आएका छन् । यस विषयमा वडा कार्यालय चिन्तित पनी भइसकेको छ । अब आफ्नै वडामा रोजगारको व्यवस्थापन र उनीहरुलाई आफ्नै ठाँउमा काम गर्ने वातावरण बनाउने कार्यमा वडा कार्यालय तिव्र गतिमा योजना बनाएर अगाडी बढ्ने छ । हामी केही दिन भारतबाट आउने र अन्य मुलुकबाट आउने मानिसहरुको व्यवस्थापन गरिसकेपछी तत्काल रोजगारको विषयलाई सम्वन्धीत निकाय संग सहकार्य गरि अगाडी बढ्ने छौँ ।
क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन कार्य निकै चुनौती बनिरहेको छ तपाईको हालत पनी त्यही त होलानी ?
क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न एक प्रकारको चुनौती बन्यो तर हामी स्थानिय निकाय जनप्रतिनिधीका हैसियतले यसलाई समधान गर्नु र आफ्नो जनता जन्मभुमीमा फर्केपछी गर्नपर्ने दायित्व जिम्मेवारी बहन गर्नैपर्छ उहाँहरुले आशा र भरोसा राख्ने हामीसंगै हो । त्यसैले हामीलाई कठिनाई त भयो र तर समस्या जहाँ आउछ त्यही समधान गर्दै ग¥यौँ । यस विषयमा सबै वडाबासीहरुको विशेष सहयोग रह¥यो । अब थप चुनौती त होला तर समाधान गर्दै अगाडी बढ्ने हो ।
क्वारेन्टाइनमा बसेका मानिसहरुको स्वास्थ्य जाँचमा किन ढिलाई भएको हो ? तपाईको पहलकदमीमा कमि आएको हो ?
स्वास्थ्य जाँचको विषयमा भारतबाट आउने मानिसहरुको संख्या एकैपटक ह्वातै बढ्यो । स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्न पक्कैपनी स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई अप्ठयारो भएकै होला । हामीले स्वास्थ्य जाँचका विषयमा नगरपालिका र सम्वन्धीत निकाय संग दैनिक सम्पर्कमा छु । कतिपय स्वास्थ्य जाँच भएर घर फर्किसकेका छन् । कतिपय मानिसहरु पखाईमा छन् । केही दिन लाग्ला स्वास्थ्य जाँच छिट्टै हुन्छ ।
कोरोना भाइरस कोविड १९को महामारीको युद्धमा हामी होमीएका छौँ । कोरोनाले विश्व अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाइसक्यो । भारतबाट काम गर्न गएका मजदुरहरु आफ्नो घरतर्फ फर्कने क्रम जारी छ । रोजगारी गुमाएर कयौँ मानिसहरु घर बसेका छन् । यो समय भनेको बाँच्ने र बचाउने हो त्यसैले जस्तो परिस्थिती आएपनी समस्या संग जुधेर अगाडी बढने हो । जनताको समस्यालाई समधान गर्दै बिस्तारै विकास निर्माणका कामहरुलाई अगाडी बढाउने हो ।